Kobciye24.com | Archive | Dhacdooyinka
Nin xabsi ka doorbiday la noolaashaha xaaskiisa
70 jir ka soo jeeda gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa Talaadadii qirtay in uu dhac u gaystey Bangi isagoo taas uga gol lahaa inuu uga baxsado xaaskiisa. Lawrence Ripple ayaa ...
Laba qof oo isku qarxiyay magaalada Jiddah, Sucuudiga
Warbaahinta Sucuudiga ayaa sheegaya in laba qof ay isku qarxiyeen magaalada Jiddah. Laba qof iyo laamaha amniga ayuu dagaal dhexmaray sidoo kale. Bog lala xiriirinayo wasaaradda arrimaha gudaha ee Sucuudiga ayaa lagu ...
Daawo-Sawirro:-Spain oo qabatay qof tahriib ahaa oo lagu qariyay boorso
Booliska dalka Spain ayaa xiray laba qof oo u dhashay dalka Moroko, kuwaas oo lagu eedeeyay inay isku deyeen in ay dad si sharcidaro ah ku geliyaan dalkaasi. Waxaa lagu qabtay ...
Rabsho ka dhacday xabsi ku yaalla Brazil oo 56 ay ku dhinteen
Saraakiisha dalka Brazil waxay sheegayaan in 56 maxbuus ay ku dhinteen dagaal ka dhacay xabsi dhexdiisa. Rabshada ayaa ka dhacday xabsi lagu magacaabo Anisio Jobim oo ku yaalla magaalada Manaus ee ...
Wasiirka deegaanka ee dalka Burundi, Emmanuel Niyonkuru, ayaa lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Bujumbura, xilli uu u socday gurigiisa. Booliska ayaa sheegay in wasiirka la toogtay ka hor kowdii saq ...
Dhowr qof ayaa ku dhintay, tiro badanna way ku dhawacmeen, qarax ka dhacay meel u dhawayd gaari bas ah, magaalada bartamaha Turkiga ee Kayseri, sida ay sheegeen saraakiisha amaanka. Baska ayaa ...
Labo qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada Istaanbuul ee dalka Turkiga ayaa waxaa ku naf waayay 29 qof oo u badan ciidamo ka tirsan booliska dalkaasi. In kabadan 160 qof oo ...
Al-shabab oo sheegtay Qarax ka dhacay duleedka Muqdisho
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Siinka Dheer ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhaweyd gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu qarxiyay bar koontorool oo ay joogeen ciidammada ...